Phuket Botanical Garden Phuket ~ Journey-Assist - Mahaliana ao Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Phuket Botanical Garden
Botanical Garden (Phuket Botanic Garden), Phuket
Ny fijerena ny zaridaina botika any Phuket. Vidin-javatra.
Phuket Botanical Garden amin'ny sari-tany. Ahoana no hahatongavana any.
Saripika sy horonan-tsary ao amin'ny zaridaina Phuket Botanical
Phuket Botanical Garden Reviews (Google reviews)
Hevitra momba ny zaridaina Phuket Botanical Garden (Tripadvisor.com)
Botanical Garden (Phuket Botanic Garden). Overview
Zava-baovao vaovao ity, izay nosokafana tamin'ny taona 2011. Mandeha an-tongotra eto ianao, afaka mankafy ny zavamaniry tropikaly isan-karazany, ary koa ny fauna, satria misy bibikely maro be sy biby koa ao amin'ny zaridaina botanika.
Misy zaridaina orkide, zaridaina 20 samy hafa, zaridaina, hazo rofia, zaridaina kactus, kamory miaraka amina, zaridaina lolo, zaridaina kambana, zaridaina Japoney, anglisy ary hafa ...
Ny zavamaniry sasany ao an-toerana dia azo amidy hitombo ao an-trano taty aoriana. Ny zaridaina botanika dia manana trano fisotroana kafe sy fanomezana.
Azonao atao ny mamelona ny carps ao anaty dobo. Ny sakafo dia ho vidin'ny 20 baht. Inoana fa tena mahasoa ity karma ity.
Tsara tarehy sy voakarakara tsara ny faritany, noho izany dia mendrika hoderaina ny zaridaina. Azonao jerena ny zava-drehetra eto amin'ny 2-3 ora. Noho izany, dia manome soso-kevitra fitsidihana tsy miankina izahay, ary tsy ho isan'ny fitsangantsanganana voafetra amin'ny fotoana.
Misokatra isan'andro ny fidirana. from 9 to 17
Vidiny ao amin'ny zaridaina botikan'i Phuket
Ny vidin'ny tapakila olon-dehibe 500 THB
zanaka - 300 baht.
Fahano ny Carps - 20 THB
Ahoana no hahatongavana any. Address. Antsipirihany momba ny fifandraisana:
Ny Botanical Garden dia hita any Chalong. Tsy mandeha any aminy ny fitateram-bahoaka, misy taxi na bisikileta / fanofana fotsiny.
Tranonkala ofisialy https://www.phuketbotanicgarden.com/
Address: 98/89 Mu 4 Chao Fa Rd., Mpitsara Chalong, Distrikan'i Muang, Phuket 83130 Thailand
telefaonina: + 66 76 367 076
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/bRp6ENztoqPrRodZ6
Botanical Garden (Phuket Botanic Garden) ao amin'ny sarintany
Botanical Garden (Phuket Botanic Garden). Sary sy horonan-tsary
Phuket Aquarium "Aquarium Phuket"
Akademia Phuket vaovaoAquaria »
Ny fizahan-tany Phuket eo amin'ny sarintany
Hevitra momba ny zaridaina Phuket Botanical Garden (famerenana Google)
Tsia, bot.sad tsara. Fa azo antoka fa tsy tokony hitsidika azy io ho isan'ny fitsangatsanganana. Eto ianao dia mila mitovitovy amin'izay tianao, fa tsy maika. Na izany na tsy izany, ny olona kely any, dia vao mainka mahazo vahana anao amin'ity zaridaina botanika ity.